Tung Ming-Chin iyo alwaaxa cajiibka ah ee uu ku xardhay sawiradiisa | Abuurista khadka tooska ah
Waxaa jira waqtiyo yar oo aan la yaabno caqliga iyo maskaxda fanaaniinta qaar. Waxay nagu dhacdaa iyada oo leh sawirada alwaax ee Tung Ming-Chin, Farshaxaniste reer Taiwan ah oo kaaga tagi kara baqdin xoogaa shaqadiisa farshaxanimo ah.
Hadafkiisu waligiis ayuu ahaa ku ciyaar dareenka hoose ee dadka iyo dareenka gudaha qoto dheer. Ma doonayo inuu ka tago cid aan dan ka lahayn shaqadiisuna waxay awood u leedahay inay na dhex geliso shucuur aad u daran aragtida ugu horeysa ee aan ku qaadanayno qaar ka mid ah farshaxankiisa alwaax.
Mana iska indho tiri karno alwaax weyn iyo sawiradaas taasi waxay siinaysaa dareenka ah inay dadku ku go'doomaan dhexdooda. Fikradda salka ku haysaa waa in la muujiyo fikradda dhabta ah ee xabsi nafsi ah.
Hadana waad kuheleysaa tan ururinta oo ku duugan maskaxda aadanaha iyo beddelka booska jireed ee mid ka mid ah gudaha maskaxda, sida Ming-Chin laftiisa uu faallo ka bixinayo.
Qaar ka mid ah farshaxanno la sameeyay waxaa lagu saadaalinayaa sanduuqyo ay ku jiraan xoogaa gacan ama cag ah ku xirnaanshaha inuu ka tago dareenka xabsiga. Alwaax la jeexjeexay oo aad ku arki karto qayb ka mid ah muruqyada iyo xitaa lafdhabarta nin la foorarsaday.
Ming-Chin waxay xirataa jand cong iyo jaad bi taasina waxay astaan ​​u tahay dhaqankii hore ee Shiinaha. Sawir gacmeedyo loo qaabeeyey qaab lagu soo bandhigayo qaab jajab ah oo matalaya waqtiga. Qaybta qarsoon ee dhexda waxay ku lug leedahay horumarka iyo male-awaalka laba jibbaaran iyo qaabka.
Un farshaxaniste ku dhashay Changhua, Taiwan iyo yaa qaatay shahaadada mastarka ee Jaamacadda Taipei University of Arts. Alwaax shaqo oo muujinaya si weyn Hsu Tung Han iyo qaababkeeda dhumucda
Waanu kaa tagnay boggaaga maxaa loogu waad raaci kartaa shaqadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Tung Ming-Chin ee farshaxanno alwaax ah oo umuuqda inay dad ku jiraan